Isamsung iyaqhubeka nokuhla, bayakukhumbula oomatshini bokuhlamba abazizigidi ezi-2,8 | IPhone iindaba
Isamsung iyaqhubeka ukuhla, iya kukhumbula umatshini wokuhlamba we-2,8 yezigidi
Nokuba inobunzima obungakanani kubo, Isamsung ibeyinto ephambili kwezobuchwephesha kulo nyaka, kwaye ndinobuganga bokuthi le ndima izakuhlala okwexeshana ... Kwaye ingxaki ye-Galaxy Note 7 ibiyinto enzima kakhulu, enzulu kangangokuba abafana baseSamsung beza kurhoxisa ukuveliswa kwemodeli iziqhushumbisi, i-Samsung Galaxy Note 7 sele sisixhobo sembali ...
Kwaye ukuba babenalo naliphi na ithemba lokuphola kwimbobo ngokukhawuleza, kubonakala ngathi kukho umntu obeke iliso elibi kubo ... Ukuba i-Samsung yaziwa ngokoluhlu lwezixhobo eziphathwayo, ikwanoluhlu lwazo lwezixhobo zasekhaya, kwaye ezi yingxaki ngoku. Ukuqhuma okutsha: Iziciko ze-washer eziphezulu ezingama-2011 ziyaqhushumba ...
Uye wakwazi ukuyenza kwividiyo edlulileyo, a Umatshini wokuhlamba we-Samsung ukhukulisiwe ngokupheleleyo ngenxa yomonakalo athe wabakho xa ujikeleza, kwaye uye ukuba uye wasonta ... Eli lityala elitsha elinamahloni labafana baseSamsung, ityala elitsha ngokungathandabuzekiyo elisusa, kwakhona, ukhetho lokubuyela umva. Kule meko, ingxaki ibonakala ngathi iza nayo igubu lomatshini wokuhlamba, Igubu ukuba iye ingalingani Ngelixa umatshini wokuhlamba ukwinkqubo yokujikeleza, into efikileyo kwezinye iimeko Khupha isiciko esisuka kwisisu semoto somatshini wokuhlamba esenza ukuba siqhume.
Izikhalazo ezingama-733 Isamsung ibinengxaki zolu hlobo, kubandakanya enye yokubangela umhlathi owaphukileyo kumsebenzisi. Khawufane ucinge xa ​​usondela kumatshini wakho wokuhlamba iimpahla ukubona ukuba kutheni isenza ingxolo engaka kwaye uphele usitsibela isiciko saso ... Isisombululo: a ukulungiswa kwekhaya lasimahla, okanye isaphulelo sokuthenga umatshini omtsha wokuhlamba Isamsung, akukho mali ibuyiswayo… Ke ukuba unomatshini wokuhlamba umthwalo omkhulu ngo-2011, lumka. Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba kulihlazo ukuba isigebenga esinjengeSamsung sihamba nazo zonke ezi ngxaki, iSamsung yayiyinkampani enkulu kwaye ngenxa yezicwangciso ezimbi ibona ukuba ihla njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Isamsung iyaqhubeka ukuhla, iya kukhumbula umatshini wokuhlamba we-2,8 yezigidi
Icandelo lezinto zombane lakwaSamsung andithandabuzi ukuba linento yokwenza nokwahlulahlulwa kweselfowuni, emva koko ezi ndaba zijongeka zisoyikeka….
IOS 5 Ngonaphakade sitsho
Ngaba ujonge uloyiko? Abantu abaliqela bonzakele kwanomhlathi owaphukileyo ubonakala umncinci kuwe? Ewe kunjalo, kuba khange yenzeke kuwe ...
Phendula kwi-IOS 5 Ngonaphakade
Ndithi ujonge ukoyikeka, kuba andazi ukuba zeziphi iindaba ezinje ngale webhusayithi ... kuba andiziboni iindaba ezinjengeziphene zeTV yakwaSony okanye ezinye ezifanayo kwezinye iimveliso (nazo Ukwahlulahlulwa kweselfowuni kwaye kukhuphiswano ngqo lwe-iPhone, ukuba yayiyinjongo yopapasho leyo).
U-Sony luphawu lwesibini kwimakethi yokunxibelelana ngomnxeba, kwaye ukuza kuthi ga ngoku alunangxaki kwisahlulo se-smartphone. Ukuba i-Samsung ibinengxaki yokuhlamba oomatshini bodwa, ngekhe ivele kwibhlog efana neyethu. Kuyavela kuba emva kwengxaki evakalayo ngeNqaku lakho le-7 ngoku kubonakala ngoomatshini bokuhlamba. Siyazi ukuba ziiyantlukwano ezahlukileyo, kodwa ekugqibeleni ilolo hlobo lunye, kwaye umthengi yeyona nto ibaluleke kakhulu kwiimeko ezininzi, abangeni kulomahluko analo uphawu ngalunye.
Ndisacinga ukuba ayinanto yakwenza nayo, kuba njengokuba i-Samsung ibinengxaki koomatshini bayo bokuhlamba iimpahla, i-ACER ikwanazo neengxaki zeelaptops ezixhaphaze ibhetri, okanye uSony ubeneengxaki ngeTV kunye nezixhobo zomculo ezinikezela ukukhutshwa abasebenzisi; Zombini ngokwahlula-hlula okuza kwenzeka apho inokuba ibali elinje lenziwa.
Kodwa ke, ngokubona endikubonileyo, akukho luvo lomntu luzakutshintsha… .. kwaye ibingezonjongo zam, ukunika umbono wam, endicinga ukuba yiyo le nto kukho ukhetho lwezimvo, endaweni yokuthi I-APPLE KULUNGILE, OLUPHELELEYO OLUNGAPHAKATHI ... ngelishwa lwenzeka okuninzi apha kunye nabasebenzisi abaliqela abangenanto kwaphela.
Hi ndlela leyi, inqaku elilunge kakhulu kwi-Live Listen, endisandul 'ukuyifunda. Sele ndiza kuncomela kumhlobo wam ukuba athenge uncedo lokuva lwe-MFi, njengoko inengxaki efanayo naleyo uyikhankanyileyo kwinqaku.
Abantu bahluthwe kukwahlulwa kwezinto zasekhaya kunye netekhnoloji yeselfowuni, uphawu luphawu kwaye abathengi bacinga njalo, ewe, iyakubachaphazela.
UKarim Hmeidan sitsho
Ngokuchanekileyo, yile nto siyicingayo, ngokucacileyo icandelo elihambahambayo alifani nelo lezixhobo zasendlini (khange sitsho ngenye indlela), sibhekisa kuphawu, yonke into iphantsi kwesambrela seSamsung kwaye zezona zinengxaki.
Ngezi zinto abantu baya kucinga ukuba Samsung = iingxaki.
Phendula uKarim Hmeidan
Ewe, ukuba abantu bacinga ukuba ngenxa yokuba enye yeemveliso zabo (yazo zonke ezo zinto bazenzayo) ihambe gwenxa, nokuba zimbi kangakanani na, sele ingumkhwa onengxaki, abanalwazi kwaphela. Yidrowa yokuba nakulona hlobo lunye, ayizizo ke ezo zoyilo, okanye iinjineli ezifanayo okanye abaphathi beempawu ezifanayo abathatha inxaxheba kuzo zonke izinto… .kuphela kwento abanayo ngokufanayo luphawu kunye nenye into.
Oyena ungazi nguwe. Ngaba usebenza eSamsung okanye yintoni?
Hayi, enyanisweni, luphawu olungakhathaliyo kum ... kodwa into endiyiyo injineli kwaye ndicinga ukuba ndiyazi ngokungaphaya ukuba umba weemveliso, ukwenziwa kwazo kunye nolawulo lwazo lusebenza njani. Ngokucacileyo uphawu ngokubanzi luphulukene nomphunga ngenxa yesiphelo (kuya kufuneka ubone idatha yayo kwimarike yemasheya). Kodwa ukusukela apho, uye kuthenga, umzekelo, umabonakude uthi 'hayi, injalo le Samsung, andiyithengi, hleze iqhume njengeNqaku 7'… Ke ndiya kuba yiyo yonke into oyifunayo, kodwa ungazi nto malunga neli hlabathi, ungakholelwa kum.
Molo Luis, jonga, ndicinga ukuba unyanisile, kodwa abantu bafaka yonke into ebhegini enye kwaye kufuneka uyazi lonto kwaye bona kunye nabatyali mali bayayazi kakuhle, yiyo loo nto iwa ebhegini, ndikuxelela ngakumbi, ngalento yokuhlamba kutsha umatshini, abantu baya kuba nentandabuzo ukuba imveliso abafuna ukuyithenga namhlanje, ayizukuthetha ingxaki ngomso, ukungathembani okuvelisayo kuyinto eyoyikekayo, kwaye ngoku ayizukuya kulungisa ingxaki njengoko kufanele, Ibi kakhulu, kuba nomsebenzisi akasalanga nesizathu sokucinga: ukuba uyasilela ndinenkampani eyikhathaleleyo, bakunika isipho esinexabiso ngee-euro ezingama-50. Imibuliso evela eArgentina evela kwitekhnoloji yokuthengisa
Ahhh kulungile sonke sizizidumisi ngaphandle kwakho ... Ziyawa engxoweni kuba zizidumu ... abantu abaluthembi uphawu kuba bezizidumu ...
Ewe, kubonwe ngoluhlobo, kusafanele baqeshe wena ukuba ubathintele bangawi kwimarike yemasheya kwaye ubakhusele esidlangalaleni ngokubaxelela ukuba uyinjineli mega epholileyo kwaye awuyongxaki njengabanye.
Ukubulisa chump ...
Khange nditsho, kodwa hee .. ..usenokungayiqondi into awayeyithetha. Wonke umntu apho uluvo lwabo, yintoni ngaphantsi. Kodwa bendizama ukunika uluvo lwam kuba bendisebenza iminyaka emininzi njengegcisa lomgangatho kunye neenjineli zenkqubo kwiFord (Almussafes mveliso). Ngokunjalo, bekungekho mfuneko yokuhlaba umyalezo wakho, obonisa ukuba awuyonto ngaphandle kokuba ngumntwana okanye umntu ongenantlonipho (ngoku uzakundiphendula ukuba andideleli kuba bendithe umntu angangowomzekelo wangaphambili Ewe kunjalo ...).
Kwelam icala, andizukuphendula kwakhona ngalo mbandela, ndinike uluvo lwam kuphela (nokuba uyathanda okanye awuthandi), kwaye ngelixa abanye bendiphendule ngokugqibeleleyo, kubonakala ngathi uyilahlile imbiza, uphendula ngokulula ngamabinzana abantwana afana 'kwaye wena ngakumbi, upholile kangakanani'.
Yonke into ibonisa ukuba ayizukubakho i-iPhone SE kunyaka ka-2017
U-Eddy Cue "usisityebi" emva kokuthengisa izabelo ze-Apple